UGoogle usungule iwebhusayithi entsha kunye nezixhobo ezi-3 zoyilo lwezixhobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UGoogle upapasha uthotho lwezixhobo ukwenza uyilo oluhle lweMpahla
Uyilo lwezixhobo ibiyiyo Ulwimi lukaGoogle Okuqhubekile nokuvela kwiminyaka embalwa ngoku kwaye siqokelelene kule migca ngamanye amaxesha. Oku kusebenze njengomthetho wenani elikhulu lezicelo zeselfowuni kunye nedesktop esikhe sazibona kwezi zixhobo zefowuni ebezisoyisa ubomi bethu yonke imihla.
Lulwimi olunempawu zalo kwaye ukuba wenza iwebhusayithi yeselula Okanye uyafuna ukusebenzisa ulwakhiwo lwewebhu oluphendulayo, ikuvumela ukuba wenze izinto ezibonakalayo ezinokwandiswa ngengqondo kunye nokuncitshiswa ukubonelela ngamava omsebenzisi afanelekileyo. Ngoku kuxa i-G enkulu yandise uyilo lweZinto kunye iwebhusayithi entsha kunye neseti entsha yezixhobo eziza kunceda uninzi ukuyila iimveliso ezibonakalayo ezibonakalayo ezikumgangatho ophezulu.
Ngaphandle kwesazisi esibonwayo esitsha, uG omkhulu uzisa uthotho lwezixhobo ezijolise kwimiba eyahlukeneyo yenkqubo yoyilo lwemveliso kunye nokunika amandla indlela amaqela asebenza ngayo, ayile kwaye enze izicelo kunye.
Okokuqala, sine Igalari, apho ndiyazi khona yenza lula ukusebenzisana kuyilo ngokuvumela amaqela ukuba acwangcise ukuhamba kwawo kuyilo kwindawo enye ukuze wonke umntu abe nombono ofanayo wento ekusetyenzwa kuyo.
Isigaba sesinye isixhobo esenzelwe ukukunceda yenza ujongano olunamandla ngentshukumo yokusebenzisana. Isithembiso sayo kukutshintsha indlela yokudala amava asebenzisanayo ngeenjongo ezinamandla kunye nokuhambahamba kwenkqubo yokwenza amava edijithali.
Sigqiba nge-Remixer, ekuvumela ukuba ulungelelanise ujongano lweemveliso zakho zedijithali ngexesha lokwenyani ngokwazi ukulungelelanisa yonke into, ukusuka ekubeni yeyiphi imibala ukuya kwixesha lopopayi kunxibelelwano kwi-iOS, kwi-Android nakwiwebhu.
Umxube kwakhona ngoku GitHub, Igalari kunye neQonga ziyafikelela kwisimemo, ke yima ngokwenza iodolo enye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » UGoogle upapasha uthotho lwezixhobo ukwenza uyilo oluhle lweMpahla
Esi sisithuthi sokuqala emhlabeni esiy studio yokuyila eshukumayo
Yintoni entsha kwiPeyinti entsha ehlaziyiweyo